Xuzhou တိုက်စားမှုဖန်ထုတ်ကုန်ကုမ္ပဏီထံမှ tubular ဖန်ဖလား, Ltd ။
19-05-10 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
အဘို့အပလီကေးရှင်း / Components: •ဓါတ်ကူပစ္စည်း, သွေးမီဒီယာနှင့်စမ်းသပ်ခြင်း, ဆီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ •လူ့ Injection, ပါးစပ်အရည်သောက်သုံးသောခြောက်သွေ့စွာ, တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထုတ်ကုန်။ •အမွှေးနံ့သာ samplers, အမွှေးအကြိုင်ထုတ်ကုန်ပစ်လွှတ်, ဝယ်ယူ၏အချက်, အလှကုန်ကောင်တာ Giveaway ။ •စည်ပင်သာယာ & ပုဂ္ဂလိကရေစမ်းသပ်ခြင်း, en ...
အဆိုပါ borosilicate ဖန်ကဘာလဲ?
19-04-30 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
အဆိုပါ borosilicate ဖန်ကဘာလဲ? အချို့ဖန်အခြားသူများကိုမရနိုင်နေချိန်တွင်ပြန်မီးဖိုနှင့်ရေခဲသေတ္တာထဲကနေသွားနိုင်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်အစဉ်အဆက်အံ့ဩ? တစ်ဦးကနှံ့နှံ့စပ်စပ်ရှင်းပြချက်အပူတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာသမာဓိရှိနှင့်မြှောက်ဖော်ကိန်းမှသိပ်သည်းဆရဲ့စပ်လျဉ်းလေ့လာနေ, ရူပဗေဒအတွက်စာသင်လိုအပ်ပေမယ့်တစ်ဦးတိုလိမ့်မယ် ...
ဖော့ဆို့အဖုံးသို့မဟုတ်ဝါးသစ်သားအဖုံးနှင့်အတူမြင့်မားတဲ့ borosilicate ဖန်သိုလှောင်မှုအိုးတလုံး
19-04-29 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
ဖော့ဆို့ lids သို့မဟုတ်ဝါးသစ်သားအဖုံး, cookie ကိုသိုလှောင်ဘို့စံပြ, သကြားလုံး, မုန့်ညက်, bean ကို, အမွှေးအကြိုင်, စီရီရယ်စတာတွေနဲ့အတူဖော့ဆို့အဖုံးသို့မဟုတ်ဝါးသစ်သားအဖုံး Glass ကိုလုံသေတ္တာကလေးနှင့်အတူဆလင်ဒါကွန်တိန်နာအဆိုပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖန်သင်တို့တွင်မှတ်ပုံတင်အောင်, တစ်ဦးချင်းစီအိုးတလုံးရဲ့အဘယ်အရာကိုမြင်ပေးနိုင်ပါတယ် လွယ်ကူသောရဲ့ contents ။ multi-ရည်ရွယ်ချက်, bea ...
ဖော့ဆို့အဖုံးနှင့်အတူ Glass ကိုပြွန်
19-04-26 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
ဖော့ဆို့အဖုံးနှင့်အတူဖန်ပြွန်မကြာခဏဓါတ်ခွဲခန်းအသုံးပြုဒါပေမယ့်ဖော့ဆို့ဆို့သို့မဟုတ်အခြားသူများနှင့်အတူစမ်းသပ်ပြွန်ကိုလည်းထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အရသာနှင့်အနံ့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်အောင် vanilla သီးတောင့်နဲ့တူအချို့နံ့သာဆံ့ဖို့အသုံးပြုသည်။ ဖော့ဆို့နှင့်အတူတချို့ကဖန်ပြွန်, သကြားလုံးဏသဲဖော်ပြရန်ကိုလည်းစင်ကြယ်သောအလှဆင်တ္ထုများမှာ ...
သိပ္ပံနည်းကျနှင့်ဆေးဝါးစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် round Glass ကိုဖလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကျင်းပနိုင်ရန်စွမ်းရည်များနှင့်ဖန်၏အစွမ်းမဲ့သဘောသဘာဝတစ်ဦးစံဖြစ်ကြသည်။ ဓါတ်ခွဲခန်းအဆက်မပြတ်ဓာတုစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းသောအဘို့အသေးငယ်တဲ့ဖန်ခွက်ဖလားကိုအသုံးပြုပါ။ ဆေးပမာဏအနည်းငယ်ကိုလုံခြုံစိတ်ချစွာအတူဖန်ဖလားအတွက်ဖြန့်ဝေနေကြသည် ...
19-03-22 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
Borosilicate ဖန်သိုလှောင်မှုအိုးတစ်ဆိုင်မှာ, အထူးအဖြစ်အပျက်, ဒါမှမဟုတ်ထိပ်တန်းကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းနှင့်အရံမျိုးကွဲများအတွက်ထုပ်ပိုး option ကိုအဖြစ်သင့်ထုတ်ကုန်ဖော်ပြရန်တစ်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။